ETU NKATA SIRI WEE KPUDO ONYE AGHỤGHỌ: AKỤKỌ MBE NA EJULA - Eastern Reporter
September 16, 2018 easternreporter	0 Comments Akuko Ifo, Igbo
ETU NKATA SIRI WEE
KPUDO ONYE AGHỤGHỌ
Nkịta nyara akpa………. nsị agwụ n’ofịa
Akụkọ ihe mere oge gboo… oge mmadụ na ụmụ anụmanụ bụ agbataobi na-enweghị oke. Eze na-achị obodo nwere nnukwu ikpa ọ
chọrọ ka a sụchaalu ya maka ọrụ. N’ihi nke a o zipụrụ odibo ya ka ọ kụọ ekwe maa ọkwa ya n’obodo nile. O kwukwaziri na onye ọ bụla
ga-ebu ụzọ rụsịa oke a ga-ekenye ya na o ga-akpọnyè ya ada ya nwanyị ka ọ lụba. Ada eze a bụ akwa ugo, mma ya bụ nke na-aba n’isi. Ka
mbe nụrụ ozi odibo eze ahụ, na ihe so ya, ọ gbara ka onye ọkụ na-agba n’ụlọ ya, gàba na nke Ejula enyi ya nwoke maka ịga ya bụ ọrụ.
Ejula wetere ọjị gọọ ya, gwaa nna nna ha ka ha duba ha n’ije ha na-akwado ịpụ. Ndị enyi abụọ a jikere wee ga na nke eze, gwaa ihe dutere ha. Nke ọ bụla nwere nkwenye siri ike na ọ bụ ya ga-ebu ụzọ wee rụsịa oke ọrụ eze ga-ekenye ya, wee kpọrọ ada eze ka nwunye ya. Odibo eze kpọọrọ mbe na ejula ga kenye
ha ọrụ, ma chetara ha na onye gbaa bọọlụ ọ racha oroma. Mbe na ejula wee bido ya bụ ọrụ n’ike n’ike. Onye nke na-arụ ọ na-akpoku
Chukwu ka o mee ka ike gwụ onye nke ọzọ mà ọ bụ ka ihe dabido ya ibu ya ụzọ mesịa.
Ka ha na-arụ ya bụ ọrụ, otu nwaànyị gara pụta n’ebe mbe na-adọgbu onwe ya n’ọrụ. Ọ kpọrọ mbe oku wee gwa ya ka o biko nyere
ya aka wepụtara ya mkpụrụ akwụ dakpuru n’olulu. Ozi a nwaànyị a ziri mbe gbara mbe ka akpị n’obi ya, o wee jụọ ya bụ nwanyị na-ezitere ya ezite iwechighara ya aka elekere azụ. Mbe jiri ọnụma gbachị ya bụ nwanyị nkịtị, na-asụ ọhịa ya ka nke taa nke echi. Otu nwanyị
ahụ gakwukwaziri ejula rịọ ya otu ihe ahụ. Ejula lere ya anya ebere, ga nyere nwanyị ahụ aka wepụta mkpụrụ akwụ ya. Nke a bụ maka
na Ejula kwenyere na ka mmadụ na-emere onye ọzọ ka o na-emere onwe ya. Ka ejula wepụtaara nwanyị ahụ akwụ ya, ya bụ nwanyị kelere ya nke ukwu.
Nwaànyị ahụ iji kwụọ ejula ụgwọ ihe ọma o mere ya, gwara ejula ka o tie ya aka n’azụ. Ka ejula mere nke a, dimkpa iri si n’ọhịa ahụ wee
mapụta. Ha nile tinyere aka sụpụ ọhịa nile ahụ dị n’oke enyere ejula ka ọ sụọ. Ihe nke a mere dị ejula ka ọ bụ na nrọ, o tie na ada eze e rukwara ya aka. Ejula tiiri mkpù ka onye tụtara ọlaedo na-enweghị oyiri gbakwuru enyi ya nwoke bụ mbe.
Ka o ruru hụ ebe mbe na-adọgbu onwe ya n’ọrụ, ọ kọọrọ ya ihe merenụ, na etu o si bụrụ na adaeze e ruola ya aka. Mbe e wee tie na ewu a taara ya igu n’isi, gbara ọsọ gbapụ ka ọ ga zute ya bụ nwanyị ahụ. Mbe chụkwudoro nwanyị ahụ n’azụ, o wee gwaa ya si ya ya biko bịa ka ọ chọtara ya mkpụrụ akwụ ya ahụ dabara
n’olulu. Nwaànyị ahụ atụpụghị mbe ọnụ na-aga ebe ọ na-aga, mbe we chee na ihe ga-ebi okwu bụ ịkụ nwanyị ahụ ihe n’azụ dị ka ejula si
wee kọọrọ ya. Ọ tụtụrụ nnukwu okpiri wee kụọ ya nwanyị eze ahụ n’azụ. Nwaànyị mmadụ adaa gbaa rịkọọ n’ala bụrụ ozu. Mbe etie na ọ
bụghịkwa ihe ọ tụrụ n’ahịa ka a zụtaara ya.
ka nke a mere, akpata oyi jidere mbe, ihụ ya o dizie ka oke mmiri mara. Ọ gbaara ọsọ gbaje na nke dibịa na-agba afa ka ọ gwa ya ihe
ọ ga-eme iji gbochie oke ọdachi dakwasiri ya. Dibịa afa ahụ wee gwa mbe ihe ọ ga-eme iji gbanali oke mmiri ozuzo na-ejinu. Mbe gara
were ahịhịa kpụchie ozu nwaànyị ahụ. Ọ nọdụkwara ya ọdụ, tụsasịa ahịhịa n’ahụ ya nile. ka o mechara nke a, ọ gara gwa enyi ya nwoke
ka ha ga gbaa nta na o tekwara ha medebere nke ahụ. Ejula nwere añụrị tụrụ egbe ya soro mbe ba ọhịa.
Ka ha na-aga, mbe na-aja ejula ike, na-akpo ya ọ tụrụ o felie, gwaa ya na ebe ọ bụla ọ tụrụ aka gwaa ya gbaa ka ọ gbaa. Nke a bụ maka na ọ gwara ejula na ọ ka ya wee na-
atụ egbe. Ka ha ruru ebe ozu ahụ mbe zoro ezo dị, mbe tie, gwaa ejula ya lee enwe, ya gbabuo ya. Tupu mbe a na-ekwusi ihe dị ya n’ọnụ, ejula a gbaara egbe ya, gbara ọsọ ga ka ọ hụ ihe o gbagburu. Mbe bu ya ụzọ gbaruo wee chịpụtasịa ahịhịa o ji wee tuchie ozu ya bụ nwaànyị, tipu mkpù gwa ejula na o jirila egbe ya gbagbuo nwanyị eze. Ejula amaghị ka nke a
dị ya adị, o wee gwa mbe na ọ bụ ya gwara ya gbaa ya bụ egbe. Mbe ajụọ ya na o na o nweghị anya na uche, na ọ bụ a sị ya dakpuo n’ọkụ
Ụjọ bara ejula n’ahụ nke ukwu, n’ihi na iwu obodo kwuru na anya na anya ha. Nke a pụtara na ọ bụ isi ya ka ọ ga-eji wee kwụọ ụgwọ
ihe o mere. Ejula wee gbara ọsọ gbakwuru dibịa na-agba afa jụọ ya ihe ọ ga-eme iji nwere onwe ya, maka na o kwenyere na ọ bụ mbe
nyụrụ ihe na-esi. Dibịa afa wee gwa ejula ya ga zụta ọmalịcha uwe nwụda, okpu, na mgba aka mara nnukwu mma, ya yiri ya ga na nke
mbe. Ọ gwara ya mgbe o ruru na nke mbe ka ọ gwa ya na ihe ndị ahụ dara oke onụ o yi n’ahụ bụ ihe eze nyere ya iji kele ya maka igbu nwaànyị ya. ka ọ gwaa ya na o teela eze ji achọ ụzọ ọ ga-esi wee gbuo nwanyị ya ahụ maka ajọ agwa ọ na-akpaso ya, n’ihi ya ka eze ji wee were ọmalịcha ihe ndị ahụ wee kwụọ ya ụgwọ.
Ejula wee ke ekike ka nnukwu mmadụ gàba na nke enyi ya nwoke. Ka o ruru, mbe hụrụ ya sepụ ọsọ maka ọ hụnụbeghị ụdịrị nnukwu mmadụ ahụ na be ya. Ka ọsọ ahụ bara ya n’ụkwụ, ejula kpọọrọ ya gwa ya agbazila ọsọ na ọ bụ enyi ya nwoke ejula. Mbe gbachighara
azụ, ejula wee kọọrọ ya nnukwu ihe ọma meere ya. Ọ gwara ya na ihe ndị ahụ ọ hụrụ n’ahụ ya bụ ihe eze ji kwụọ ya ụgwọ maka igbu ajọ
nwaànyị ahụ. Ka mbe nụrụ nke a, o tie na ọ
nọọla na mmiri ncha a baa ya anya. O wee kọọrọ ejula otu o si wee gbuo nwaànyị ahụ. Ọ
gwakwaziri ejula na ọ bụghị ya ga-akwọsị aka wee tiere ọkụkọ akị, n’ihi nke a ka ha abụọ ga hụ eze ozigbo ozigbo ka ọ gwa eze na ọ
bụ ya bụ mbe gburu nwanyị ya na ọbụghị ejula.
Tupu asọmmiri agbụpụrụ n’ala a na-akọ, mbe ewerela ọsọ ruo na nke eze. Ọ kpọkuru eze na ndị be ya nile, wee gwa eze na ọ chọrọ ka o doo ha anya ihe mere nwaànyị ya. Ọ kọọrọ eze ka o si wee gbuo ya bụ nwanyị ma otu o si wee gbodo ya ejula. Ka ọ kọsịrị ya bụ akụkọ,
ọ gwa eze ka o mee ngwa ngwa nye ya ihe nrite ya. Eze wee tikuo ọha obodo, ka ha bịa nụrụ ihe mbe mere. Tupu mbe a na-enweta onwe
ya ịpụta n’olulu o tụnyere onwe ya, ndị agha eze a dara ya bepu ya isi. Eze wee nye iwu ka akpọnyè ejula ada ya nke bụ nkwa o kwere maka ya bụ ọrụ. Etu a ka aghụghọ mbe
siri wee dulaa ya mmụọ, nkata wee kpụdo onye aghụghọ
← Kunle Afolayan Makes This Startling Revelation About Nollywood Movies
Osun governorship election: INEC extends collection of PVC by two days →